Search by Author Name: -- Search by Author -- Alice May Chan Myae Emily Goldie Kyaw Laura Cho (Career Coach) ကိုထွန်း(ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်) ကျော့ကေခိုင် ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ခင်အေးချမ်း ဆက်ပိုင် (Kaizen) ဇင်ဖြိုးပိုင် (MESI) ဇာနည် (My Way!) ဇီဝစိုး ညီထွဋ် ညီလင်းနိုင် တိုးတက်မေ ထက်ကျော် ထိန်လင်းကျော် (HR) ဒေါက်တာစိမ့် ဒေါက်တာထွန်းဝင်း ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ဒေါ်စန်းစန်း B.Sc (Geology), DIL. DL ဒေါ်မော် (HR) နန်းကူးကူးလှိုင် M.A (English, YUFL) နီလာဝင်းမြင့် နေသစ် (MDY) မင္းခန္႕ မင္းေခါင္ (Amara) မင်းနိုင် (ရွှေဘို) မင်းအောင်မင်း မေမိုးကဗျာမောင် မောင်မောင်မြင့်သိန်း (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ရာသက်ပန် (သစ္စာပွင့်ပန်းလန်းရာမြေ) လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ) လှဘုန်းအောင်(HR Practitioner) လှိုင်ထွေး ဝတ်ရည်ချို ဝန်းလဲ့လဲ့ဇော် သူရထိုက် အဂ္ဂ အဖြူရောင် အလယ္လူ အုန်းဝမ် အောင်ဖြိုးလတ်(Right & Justice) အောင်သစ် အေးမြတ်မြတ်သူ (သူ့ထက်ကဲ) ဥကၠာျမင့္ ဦးလှမြင့် (မားကက်တင်း) ဦးအောင်သန်း ဦးအောင်သန်း ေစာကယ္ရီဝင္း (KC Myanmar) ေမာင္ျမင့္မုိရ္ (OMEGA Counsltancy) ေအာင္ခိုင္ (မီးအိမ္ရွင္)
Lockdown အပြီးမှာတွေ့ရမယ့် လုပ်ငန်းခွင်ပုံစံ (၁၀)မျိုး
အရင်က သင်သိခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ယဉ်ကျေးမှုကတော့ အခုအချိန်မှာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။ လူတွေက ဒုတိယအကြိမ်ကိုဗစ်ကို ပြန်ကြောက်လာရပြန်ပါပြီ။ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းက အရှိန်ကောင်းလာချိန်မှာ လုပ်ငန်း ခွင်ပုံစံကလည်း ပြန်လည်တင်းကျပ်ပြီး ပြန်လည်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ပုံစံတွေကဘာတွေများဖြစ် မလဲ။ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ ခံစားရတတ်တဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျား လက္ခဏာများ
ပုံမှန်ထက် ကူးစက်နှုန်း မြန်ဆန်တဲ့ ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းကို ပြည်သူတွေ အားလုံး ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ရမယ့်အချိန် ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ပထမလှိုင်းမှာ stay at home တတ်နိုင်သလောက်နေပြီး ပူပင်သောကတွေ နည်းအောင် ကြိုးစားခဲ့ရပေမဲ့ ဒုတိယအချီမှာတော့ အားလုံးရဲ့ အပူမီးတွေ တောက်လောင်ကုန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းသော ခံယူချက်များ အကြောင်း
လက်ရှိလုပ်နေသော အလုပ်က ကျမ၏ သုံးခုမြောက်အလုပ်ပါ။ ကျမကျောင်းပြီး ကတည်းက အလုပ်တွေလုပ်လာတာ အခုဆိုရင် ကုမ္ပဏီသုံးခုတောင်ရှိပါပြီ။ အလုပ်ရှင် သူဌေး တွေက ဆုံးမစကားပြောတဲ့နေရာမှာတော်ကြပါ တယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း သူတို့ပြောတာ တွေကိုလက်ခံကြပါတယ်။
ယနေ့ ၌ သင်တန်းပေါင်းများစွာတို့၌ တက်ရောက်လေ့လာသင်ယူသူများပြည့်နေခြင်းသည် ကိုယ် ဝါသနာ ပါရာ နယ်ပယ်၌ တိုးတက်မြင့်မားစေရန် သင်ယူလေ့လာခြင်းမှာ အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် နေသည် ဆိုတာကို ပြသလျက်ရှိနေပါသည်။ ဒီနေရာ၌ စာရေးသူတင်ပြချင်တာက လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်ဆိုသည်မှာ သင်တန်းတက်မှသာလျင်ရရှိခြင်းလား ဆိုတာကိုပါ။
Office Attacker တွေကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်မလဲ
ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကို အလုပ်မှာ အများဆုံးကြုံတွေ့ရနိုင်သလို စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်း အလုပ်မှာပဲ အများဆုံးကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် အလုပ်ဟာ ကျနော်တို့လူ့သက်တမ်းရဲ့ ၃ပုံ၂ပုံခန့်ကို သုံးစွဲဖြတ်သန်းကြရလို့ပါ။ အလုပ်မလုပ်ပဲ လူ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့လူဆိုတာ တစ်သိန်းမှာတစ်ယောက်လောက်ပဲရှိချင်ရှိမှာပေါ့။
COVID-19 ကာလအတွင်း Work from Home အား အလုပ်ဖြစ်စေမည့်နည်းလမ်းများ
Work from Home လေ့မရှိသူ ဒါမှမဟုတ် နေအိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာ မရှိသူတို့အတွက် နေရာအပြောင်းအလဲတွေ၊ နေအိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ သင့်ကိုလာရိုက်ခတ်မယ့် အာရုံအနှောင့်အယှက်တွေက သင့်အလုပ်ဖြစ်ထွန်းမှုကို အလျဥ်ပြတ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
Skin Care စနစ်တကျရွေးနည်း
ကိုယ်က ဘယ်လိုအသားရေအမျိုးအစားရှိတယ်ဆိုတာသိရင် ဘယ်လို skin care မျိုးကိုရွေးရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံအနေနဲ့ကတော့ ပုံမှန်အသားအရေ၊ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေ၊ ထိရှလွယ်တဲ့အသားရေ၊ ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေနဲ့ ပေါင်းစပ်အသားရေဆိုပြီး ခွဲပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ) 76
ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုများ ရင်ဆိုင်လာကြရတဲ့ အခါ
မိမိရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာ မိမိအပေါ်မိမိပဲမူတည်ပါ စေ။ ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေကို ဘဝမှာအ ကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က စိတ်နှလုံးပြင်းစွာတုန် လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် ရင်ဆိုင်နိုင် ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Page: of 111